Fanamafisana ny simika reactors simika ho an'ny sambo, fitehirizana, tanky
Home / Applications / Reactor heating induction / fanafanana reactors simika
Sokajy: Reactor heating induction Tags: Fanafanana ny réacteur simika, Tantsambo hafanana misy solika roa, fanamorana reactor simika, fanafanana sambo simika induction, mpampidina simika hafanana fampidirana, Mpanakalo hafanana induction, fanamafisana fitehirizana, Fanamafisana ny sisin-tseranana, Fanodinana ireo sambo fanafanana, Fanamafisana ny fiara mifono vy, superheater Heating, Vapourisors Heating, fanamainana sambo
Fanamafisana ny reactors simika induction-fanafanana ny siny simika
Fanafihana reactors simika ho an'ny Reactors sy kettle, Autoclaves, sambo fitaterana, fitoeran-drano fitehirizana sy fametrahan-toerana, fandroana, vata ary vilany mbola misy, sambo fanerena, vapourisor ary superheater, heat exchanger, rotary drums, paipa, visy avo roa hely misy solika ary sambo simika no mandroso be indrindra fomba azo ampiasaina amin'ny fanodinana tsiranoka.
Manana milina fanamorana fampidirana avy amin'ny 1 KW ~ 500KW izahay. Ny hafanan'ny hafanana 0 ～ 650 C. Azontsika atao ny manamboatra milina fanamafisana fampidirana mety ho an'ny karazana reactor.
Ny tombony amin'ny fanamafisana induction ho an'ny fanamafisam-peo reacor:
1. Haingam-pandeha haingana amin'ny hafanana haingana
2. Tsy misy fifandraisana ara-batana eo amin'ny coil fampidirana sy ny rindrin'ny sambo mafana
3. Fanombohana sy fanakatonana eo noho eo; tsy misy inertia mafana
4. Fihenan'ny hafanana ambany
5. Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny vokatra sy ny mari-pana amin'ny rindrin'ny sambo
6. Fampidirana angovo avo lenta, mety tsara amin'ny fanaraha-maso mandeha ho azy na micro-processeur
7. Faritra mampidi-doza na fitrandrahana indostrialy mahazatra amin'ny herin'ny tsipika
8. Fanafanana fanamiana maimaimpoana maimaimpoana amin'ny fahombiazana avo lenta
9. Vidina ambany
10. mari-pana ambany na avo
11. Tsotra sy malefaka hiasa
12. Fikolokoloana farany ambany
13. Kalitaon'ny vokatra mifanaraka
14. Ny heater dia mizaka tena miaraka amin'ny farafahakeliny takiana amin'ny velarana
15. Safty sy milamina mandritra ny 24 ora fiasana & Maherin'ny 10 taona fiainana miasa
Volavola coil fanafanana induction Azo ampifanarahana amin'ny sambo metaly sy tanky misy endrika sy endrika maro, manomboka amin'ny santimetatra vitsivitsy ka hatramin'ny metatra maromaro na savaivony. Ny vy malefaka, ny vy malefaka, ny vy tsy miorina na ny sambo tsy misy vy dia azo hafanaina tsara. Amin'ny ankapobeny ny hatevin'ny rindrina farafahakeliny 6 ~ 10mm no tolo-kevitra.
The milina fanamafisam-peo mihodina ahitana:
1. hery fanamafisana induction.
2. coil fanafanana fampidirana.
3. Manitatra tariby
4. K karazana thermocouple sns.
Ny fanamafisana induction dia manolotra tombony tsy hita amin'ny rafitra hafa: fanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana zavamaniry ary ny fepetra miasa tsara kokoa ary tsy misy hafanana lehibe amin'ny manodidina.
Indostria mahazatra mampiasa fanamorana ny induction:
• Reacteur sy kettle.
• Famonoana adhesive sy manokana.
• Simika, gazy ary solika.
• Fanodinana sakafo.
• Famaranana ny metallurgical sy metal sns.
Manana traikefa 20 taona mahery isika ao induction heating ary efa namolavola, namolavola, nanamboatra, nametraka sy nanendry ny rafitra Vessel sy Pipe Heating ho an'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao. Ny fanamafisana induction dia maneho ny fanamoriana rehetra amin'ny herinaratra nalaina mivantana tamin'ny fizotrany ary niova ho hafanana amin'izay toerana takiana. Azo ampiharina amin'ny fomba mahomby amin'ny saika ny rafitra sambo na fantsona mila loharano mafana.
Manolotra tombony maro tsy azo raisina amin'ny fomba hafa ny induction ary manome fihatsarana ny fahombiazan'ny famokarana zavamaniry sy ny toe-javatra iasana satria tsy misy hafanana be dia be amin'ny manodidina. Ny rafitra dia mety indrindra amin'ny fizotran'ny fihetsika mifehy akaiky toy ny famokarana resins synthetic ao amin'ny faritra Hazard.
Toy ny tsirairay sambo fanafanana fampidirana dia namboarina ho an'ny mpanjifa tsirairay ny filàna manokana sy ny fepetra takiana, manolotra habe miovaova izahay amin'ny tahan'ny hafanana samy hafa. Ireo injenieranay dia efa nanana traikefa an-taonany maro tamin'ny fivoarana namboarina namboarina rafitra fanamorana ny induction ho an'ny fampiharana marobe amin'ny indostria maro karazana. Ny heater dia namboarina mba hifanaraka amin'ny takiana marina amin'ny fizotrany ary namboarina mba hametahana haingana ilay sambo na amin'ny asantsika na eo an-toerana.
• Tsy misy fifandraisana ara-batana eo amin'ny coil fampidirana sy ny rindrin'ny sambo mafana.
• Fanombohana haingana sy fanidiana. Tsy misy inertia mafana.
• Fihenan'ny hafanana ambany
• Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny vokatra sy ny mari-pana amin'ny rindrin'ny sambo raha tsy mitifitra.
• Fidiran'ny angovo avo. Mety amin'ny fifehezana mandeha ho azy na micro-processeur
• faritra mampidi-doza na fiasan'ny indostrialy mahazatra amin'ny herin'ny tsipika.
• Fanafanana fanamiana maimaimpoana maimaimpoana amin'ny fahombiazana avo lenta.
• Vidina ambany.
• Miasa amin'ny mari-pana ambany na avo.
• Tsotra sy malefaka hiasa.
• Fikolokoloana farafahakeliny.
• Kalitaon'ny vokatra mifanaraka.
• Mahaleo tena amin'ny sambo miteraka takiana amin'ny gorodona farany ambany farafahakeliny.
Volavola coil fanafanana induction dia azo ampifanarahana amin'ny sambo metaly sy tanky manana endrika sy endrika be mpampiasa ankehitriny. Manomboka amin'ny centremetres vitsivitsy ka hatramin'ny savaivony metatra na halavany. Ny vy malefaka, ny vy malefaka, ny vy tsy miova na ny sambo tsy misy vy dia azo hafanaina tsara. Amin'ny ankapobeny ny hatevin'ny rindrina kely indrindra amin'ny 6mm no tolo-kevitra.
Ny volavolan-kevitry ny naoty unit dia manomboka amin'ny 1KW ka hatramin'ny 1500KW. Amin'ny rafitra fanamafisana induction dia tsy misy fetrany ny fidiran'ny haavon'ny herinaratra. Ny fetra rehetra misy dia apetraky ny hafanana avo lenta avoakan'ny vokatra, ny fizotrany na ny toetran'ny metallurgical ny fitaovan'ny rindrin'ny sambo.
Ny fanamafisana induction dia maneho ny fanamoriana rehetra amin'ny herinaratra nalaina mivantana tamin'ny fizotrany ary niova ho hafanana amin'izay toerana takiana. Koa satria ny fanafanana dia atao mivantana amin'ny rindrin'ny sambo mifandraika amin'ilay vokatra ary ambany dia ambany ny fatiantoka ny hafanana, mahomby tokoa ny rafitra (hatramin'ny 90%).
Ny fanamafisana induction dia manolotra tombony be dia be tsy azo amin'ny fomba hafa ary manome fihatsarana ny fahombiazan'ny famokarana zavamaniry sy ny toe-javatra iasana tsara kokoa satria tsy misy hafanana lehibe amin'ny manodidina.
• Reacteur sy kettle
• Famonoana adhesive sy manokana
• Simika, gazy ary solika
• Fanodinana sakafo
• Famaranana vy sy vy
• Fanamafisana mialoha ny hafanana
• fanafanana bobongolo
• Mety & tsy mendrika
• Fanamainana sakafo
• Fanafanana ny rano amin'ny fantsona
• Fanafanana sy fanamafisana ny sambo
Ny HLQ Induction In-Line Heater dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana:
• Fanafanana ny rivotra sy gazy ho an'ny fanodinana simika sy sakafo
• Fanafanana solika mafana ho an'ny menaka fanodinana sy fihinana
• Famoahana etona ary fanamafisana: mampiakatra ny etona eo noho eo, mari-pana / tsindry ambany ary avo (hatramin'ny 800ºC amin'ny bar 100)
Ny tetik'asa Vessel sy Heater mitohy maharitra dia misy:
Reacteur sy kettle, Autoclaves, sambo fitetezana, fitoeran-drano fitehirizana sy fametrahan-toerana, fandroana, vata ary vilany mbola misy, sambo fanerena, vapourisors ary superheater, heat exchanger, amponga Rotary, fantsom-boaloboka, sambo vita amin'ny solika roa.
Ny tetikasa In-Line Heater teo aloha dia misy:
Heateran'ny etona mahery setra mahery, heater amin'ny rivotra miverina, heaterina menaka fanosorana, menaka azo hanina ary heater-menaka fikotranana, heaters entona misy ny nitriter, Nitrogen Argon ary Catalytic Rich Gas (CRG) heater.
Fanamorana ny induction dia fomba tsy mifandray amin'ny fanafana hafahafa fitaovana elektronika-conductive amin'ny alàlan'ny fametrahana sahan'andriamby mifandimby hampisy herinaratra elektrika, fantatra amin'ny anarana hoe ony eddy, ao amin'ilay akora, fantatra amin'ny hoe suseptor, amin'izay dia manafana ny suseptor. Ny fanamafisana induction dia nampiasaina tao amin'ny indostrian'ny metalurgique nandritra ny taona maro mba hampiasaina amin'ny metaly fanafanana, ohatra ny fandrendrehana, ny fanadiovana, ny fitsaboana ny hafanana, ny welding ary ny fametahana azy. Ny fanamafisana induction dia ampiharina amin'ny hatetika marobe, manomboka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny herinaratra AC ambany hatrany amin'ny 50 Hz ka hatramin'ny hatetika am-polony MHz.
Amin'ny haavo induction iray dia mitombo ny fahombiazan'ny hafanana eo amin'ny sehatry ny induction rehefa misy làlana fitarihana lava kokoa ao anaty zavatra. Ny sombin-javatra mafy orina dia mety hafanaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny matetika, raha toa kosa ny zavatra madinidinika dia mitaky famerenana matetika. Ho an'ny zavatra iray habe hafanaina, ny ambany matetika dia manome hafanana tsy mahomby satria ny angovo eo amin'ny sehatry ny fampidirana dia tsy miteraka ny tanjaky ny onja eddy ao amin'ilay zavatra. Ny fahita matetika loatra, etsy ankilany, dia miteraka fanafanana tsy mitovy satria ny angovo eo amin'ny sehatry ny fampidirana dia tsy tafiditra ao amin'ilay zavatra ary ny onja eddy dia mitaona fotsiny na manakaiky ny velarana. Na izany aza, ny fanamafisana induction ny rafitra metaly mora azo entona dia tsy fantatra amin'ny zavakanto teo aloha.
Ny fizotran'ny zava-kanto alohan'ny valin'ny katalyzy dia mitaky ny hananan'ny catalyst faritra amboniny mba hahafahan'ny molekiola reactant hifandray amin'ny faritry ny catalyst. Ny fizotran'ny zavakanto teo aloha dia mazàna mampiasa fitaovana famporisihana porous na potika kely maro catalytic, tohanan'ny mety, mba hahatratrarana ny velarantany takiana. Ireo fizotran'ny zavakanto teo aloha ireo dia miankina amin'ny conduction, radiation na convection hanomezana hafanana ilaina amin'ny catalyst. Mba hahatratrarana ny fisafidianana tsara ny fanehoan-kevitra simika ny ampahany rehetra amin'ny reactants dia tokony hiaina ny mari-pana sy ny tontolo catalytic. Ho an'ny fanehoan-kevitra endothermika, ny tahan'ny fandefasana hafanana noho izany dia mila fanamiana araka izay azo atao amin'ny haben'ny fandriana katalyzy. Ny conduction, sy ny convection, ary koa ny taratra, dia voafetra amin'ny fahafahany manome ny taha ilaina sy ny fitoviana amin'ny fandefasana hafanana.
Ny GB Patent 2210286 (GB '286), izay mahazatra ny zavakanto teo aloha, dia mampianatra ny fitrandrahana katalenta kely izay tsy mandeha amin'ny herinaratra amin'ny fanohanana metaly na ny fampidinana ny catalyst hampandeha azy amin'ny herinaratra. Ny fanohanana metaly na ny fitaovana fanadiovana dia entina hafanaina ary avy eo manentana ny mpiorina. Ity patanty ity dia mampianatra ny fampiasana ny core ferromagnetic mandalo afovoany amin'ny fandriana catalyst. Ny fitaovana tiana indrindra ho an'ny ivon'ny ferromagnetika dia vy silika. Na dia ilaina amin'ny fanehoan-kevitra hatramin'ny 600 degre C. aza, ny fitaovan'ny GB Patent 2210286 dia mijaly noho ny fetra farany amin'ny maripana ambony. Ny fanjifana andriamby ny ivon'ny ferromagnetika dia hihena be amin'ny hafanana avo kokoa. Araka ny voalazan'i Erickson, CJ, "Handbook of Heating for Industrial", pp 84-85, ny fanjifana vy misy ny vy dia manomboka mihaosa amin'ny 600 C ary lasa tamin'ny fomba mahomby tamin'ny 750 C. Satria, amin'ny fandaminana ny GB '286, ny andriamby Ny saha eo am-pandriana mpiorina dia miankina amin'ny permeabilité magnetika ao amin'ny fotom-pitrandrahana ferromagnetika, ny fandaminana toy izany dia tsy hampafana ny hafanana amin'ny hafanana mihoatra ny 750 C, mainka fa ny mihoatra ny 1000 C takiana amin'ny famokarana HCN.
Ny fitaovana GB Patent 2210286 dia inoana koa fa tsy mety simika amin'ny fanomanana ny HCN. Ny HCN dia vita amin'ny amoniaka mihetsika sy gazy hydrocarbon. Fantatra fa ny vy dia miteraka lo ny lohan'ny amoniaka amin'ny hafanana avo. Inoana fa ny vy misy ao anatin'ny fotom-pitaterana ferromagnetika sy ao amin'ny mpanohana ny katôlika ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny GB '286 dia mety hiteraka famotehana ny amoniaka ary hanakana, fa tsy hampiroborobo, ny fihetsika iraky ny amoniaka miaraka amin'ny hydrocarbon hamorona HCN.
Hydrogen cyanide (HCN) dia singa simika manan-danja amin'ny fampiasana maro amin'ny indostrian'ny simika sy ny harena ankibon'ny tany. Ohatra, ny HCN dia akora ilaina amin'ny famoronana adiponitrile, acetone cyanioxidin, sodium cyanide, ary mpanelanelana amin'ny famokarana fanafody famonoana bibikely, vokatra fambolena, mpiompy chelating, ary sakafom-biby. Ny HCN dia ranoka misy poizina mahery izay mangotraka amin'ny 26 degre C., ary toy izany, dia iharan'ny fametahana henjana sy ny lalàna mifehy ny fitaterana. Amin'ny fampiharana sasany, ilaina ny HCN amin'ny toerana lavitra lavitra ny toerana fanamboarana HCN marobe. Ny fandefasana HCN amin'ireo toerana toy izany dia mitaky loza lehibe. Ny famokarana ny HCN amin'ny toerana anaovana azy dia hialana amin'ny loza atrehana amin'ny fitaterana, ny fitehirizana ary ny fikirakirana azy. Ny famokarana HCN an-toerana kely eo an-toerana, mampiasa fizotran'ny zavakanto teo aloha, dia tsy ho azo tanterahina ara-toekarena. Na izany aza, ny ambaratonga kely, ary koa ny refy lehibe, ny famokarana HCN eo an-toerana dia azo tanterahina amin'ny lafiny teknika sy ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fizotrany sy ny fitaovana entina mamorona ankehitriny.
Ny HCN dia azo vokarina rehefa ampiarahina amin'ny hafanana avo, misy na tsia ny catalyst ireo fitambarana misy hidrogen, azota, ary karbonina. Ohatra, ny HCN dia matetika ataon'ny valin'ny amoniaka sy ny hydrocarbon, fanehoan-kevitra izay tena endothermika. Ny fizotry ny varotra telo amin'ny fanaovana HCN dia ny Blausaure aus Methan und Ammoniak (BMA), ny Andrussow, ary ny fizotran'ny Shawinigan. Ireo fizotran-javatra ireo dia azo zahana amin'ny alàlan'ny fomba famokarana hafanana sy famindrana, ary amin'ny alàlan'ny fampiasana catalyst.
Ny fizotran'ny Andrussow dia mampiasa ny hafanana ateraky ny fandoroana ny gazy karbonika sy oksizena ao anatin'ny haben'ny reactor mba hanomezana hafanan'ny fihetsika. Ny fizotry ny BMA dia mampiasa ny hafanana ateraky ny doro fandoroana ivelany mba hanafanana ny endrika ivelany amin'ny rindrin'ny réacteur, izay avy eo manafana ny atin'ny rindrin'ny réacteur ary manome ny hafanan'ny fanehoan-kevitra. Ny fizotran'ny Shawinigan dia mampiasa fantson-herinaratra mikoriana amin'ny alàlan'ny elektroda ao am-pandriana mihetsika mba hanomezana hafanan'ny fihetsika.
Ao amin'ny fizotran'ny Andrussow, ny fifangaroan'ny entona voajanahary (fifangaroan'ny gazy karbonika misy metana), amoniaka ary oksizena na rivotra dia misy fihetsika eo alohan'ny fisian'ny catalyst platinum. Ny catalyst dia mazàna misy sosona maromaro amin'ny kofehy platinum / rhodium. Ny habetsaky ny oksizenina dia toy izany ny fandoroana ampahany amin'ny réactants dia manome angovo ampy hamerenana ireo reactants amin'ny maripana miasa mihoatra ny 1000 ° C. ary koa ny hafanan'ny fihetsika ilaina amin'ny fananganana HCN. Ireo vokatra fanehoan-kevitra dia HCN, H2, H2O, CO, CO2, ary ny habetsaky ny nitrite ambony, izay tsy maintsy sarahina avy eo.
Ao amin'ny fizotry ny BMA, mifangaro amoniaka sy metana no mikoriana ao anaty fantsom-bakoly tsy misy porosy vita amin'ny akora hafanana mahery. Ny atin'ny fantsona tsirairay dia nilahatra na nopetahany potika platinum. Ny fantsona dia apetraka ao anaty lafaoro avo lenta ary hafanaina ivelany. Ny hafanana dia entina amin'ny alàlan'ny rindrin'ny seramika mankany amin'ny vatan'ny catalyst, izay ampahany lehibe amin'ny rindrina. Ny fanehoan-kevitra dia matetika atao amin'ny 1300 ° C. satria ny reactants dia mifandray amin'ny catalyst. Ny fiakaran'ny hafanana takiana dia avo noho ny hafanan'ny fiakarana avo, ny hafanana lehibe an'ny fanehoan-kevitra, ary ny zava-misy fa ny coking amin'ny vatan'ny catalyst dia mety hitranga eo ambanin'ny maripanan'ny fanehoan-kevitra, izay mampihena ny catalyst. Satria ny fantsom-boaloboka tsirairay dia matetika manodidina ny 1 ″ ny savaivony, fantsona maro be no ilaina hihaona amin'ny fitakiana famokarana. Ny vokatra azo dia ny HCN sy hidrogen.
Ao amin'ny fizotran'ny Shawinigan, ny angovo ilaina amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny fangaro mifangaro amin'ny propane sy ny amoniaka dia omen'ny onja elektrika mikoriana eo anelanelan'ny elektrôdra milentika ao am-pandriana voadio amin'ny poti-kobika tsy catalytic. Ny tsy fisian'ny catalyst, ary koa ny tsy fisian'ny oksizena na rivotra, amin'ny fizotran'ny Shawinigan dia midika fa ny fihetsika dia tsy maintsy atao amin'ny hafanana avo be, mazàna mihoatra ny 1500 degre C. Ny mari-pana avo kokoa takiana dia ny famerana bebe kokoa aza amin'ny fitaovana fanamboarana ho an'ny fizotrany.
Raha, araka ny nambara tetsy ambony, dia fantatra fa ny HCN dia azo vokarina amin'ny fihetsiky ny NH3 sy ny gazy hydrocarbon, toa ny CH4 na C3H8, miaraka amin'ny cataly metaly vondrona Pt, mbola ilaina ny manatsara ny fahombiazan'ny ny fizotrany sy ny mifandraika amin'izany mba hanatsarana ny toekarena amin'ny famokarana HCN, indrindra ho an'ny famokarana bitika. Zava-dehibe indrindra ny hampihenana ny fampiasana angovo sy ny fahombiazan'ny amoniaka raha ampitomboina ny tahan'ny famokarana HCN raha ampitahaina amin'ny habetsaky ny cataly metaly sarobidy nampiasaina. Ankoatr'izay, ny catalyst dia tsy tokony hisy fiantraikany ratsy amin'ny famokarana HCN amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ireo fanehoan-kevitra tsy ilaina toy ny coking. Ankoatr'izay dia irina ny hanatsara ny hetsika sy ny fiainan'ireo catalista ampiasaina amin'ity dingana ity. Zava-dehibe, ny ampahany lehibe amin'ny fampiasam-bola amin'ny famokarana HCN dia ao amin'ny catalyst group platinum. Ny zava-baovao ankehitriny dia manafana mivantana ny catalyst, fa tsy ankolaka toy ny tamin'ny zavakanto teo aloha, ary amin'izany dia manatanteraka ireo desiderata ireo.
Araka ny efa noresahina teo aloha, ny hafanana fampidirana matetika dia fantatra fa manome fitoviana tsara amin'ny famoahana hafanana amin'ny haavon'ny herinaratra avo lenta amin'ny zavatra izay manana lalan-kely mandeha amin'ny herinaratra. Rehefa manome ny angovo fanehoan-kevitra amin'ny fihenan'ny gas endothermic dia miteraka fihenan'ny angovo farany ambany ny hafanana. Ny fepetra takiana amin'ny fandefasana hafanana mitovy sy mahomby amin'ny faritra avoavo, ny cataly-permeable catalyst massa dia toa mifanohitra amin'ny fahafaha-manafana ny induction. Ny noforonina ankehitriny dia mifototra amin'ny valiny tsy nampoizina azo tamin'ny alàlan'ny fananganana reaktor izay manana endrika firafitra vaovao ilay catalyst. Ity endriny firafitra ity dia mampifangaro ny fiasa amin'ny: 1) làlan-dàlana maharitra lava mandeha amin'ny alàlan'ny herinaratra, izay manamora ny fanamorana fidirana mivantana ny catalyst amin'ny fomba fanamiana, ary 2) katalazy manana velarana avo; ireo fiasa ireo dia miara-miasa mba hanamorana ny fanehoan-kevitra simika endothermika. Ny tsy fahampian'ny vy tanteraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia manamora ny famokarana HCN amin'ny alàlan'ny fihetsiky ny NH3 sy gazy hydrocarbon.
Réacteur d'exploitation induction
Fanamafisana ny reacteur induction